Izikim Umbala wegumbi lokulala-Yenza ukulala kwakho kubengcono ngokukhetha umbala ochanekileyo wepeyinti yodonga - Bedroom Colour Schemes
Izikim Umbala wegumbi lokulala-Yenza ukulala kwakho kubengcono ngokukhetha umbala ochanekileyo wepeyinti yodonga
Ngaba uyazi ukuba imibala yepeyinti yedonga lokulala ichaphazela kakhulu umgangatho wokuphumla? Ngaphandle kokukwazi ukubonelela ngendawo entle, ukukhetha umbala wokupeyinta ofanelekileyo kunokuba nefuthe elihle kwimpilo yeemvakalelo.
Igumbi lokulala elinomsebenzi wayo ophambili njengendawo yokuphumla emva kosuku lokudinwa kwemisebenzi, ngaphandle kokuyazi nayo iba yindawo apho sinciphisa khona ‘ukukhathala ngokweemvakalelo’, ubuvila, okanye indawo yokufunda iincwadi okanye ukubukela umabonwakude ngelixa ulele ungakhange ubekhona ukuphazamiseka abanye.
Ngelishwa, abaninzi abayiqondi indlela yokukhetha umbala wokupeyinta ofanelekileyo oza kusetyenziswa kwigumbi lakhe lokulala. Ubukhulu becala, umbala okhethiweyo ngumbala owuthandayo / owuthandayo okanye omhlophe unesizathu esicocekileyo okanye esikhanyayo. Ngapha koko, umbala ngamnye unoluvo olwahlukileyo. Ukukhetha imibala engalunganga kunokubangela isithukuthezi, kuchaphazele ukwehla kwemood, kwaye kukwenza ungakwazi ukuphumla kuba imibala esetyenziswe engqondweni ikhuthaza.
Izikimu zombala wegumbi lokulala elicetyiswayo
Le ilandelayo yimibala yegumbi lokulala esikhethe ukukunceda ukuba uphumle ngokuzolileyo nangakumbi.
Izikimu zombala wegumbi lokulala # 1: Oluhlaza
Umbala oluhlaza ukholelwa ukuba unika imbonakalo yegumbi elingaphezulu kwendalo ukuze likwazi ukubonelela ngemeko elungileyo kwigumbi. Umbala onxulunyaniswa nemibala yendalo, njengamagqabi, ingca, umoya wentaba wenza ukuba igumbi lamagumbi lihlaziyeke ngakumbi kwaye lihlaziyeke.
Khetha igqabi eliluhlaza, ukukhanya okuluhlaza okanye okuluhlaza okotshani. Imibala ezolileyo kunye engathandekiyo yokupeyinta olu donga ngaphandle kokubangela ukuzola inokunceda ukukhuthaza ingqondo yomntu ukuba izive ihlaziyeke ngokukhawuleza xa ndivuka. Isiphumo kukulala okuphumla ngakumbi kwaye kunciphisa ubuvila emva kokuvuka kwaye kukukwenza uzive uhlaziyekile kwaye unamandla angakumbi.
Izikimu zombala wegumbi lokulala # 2: Blowu
Ngaphandle kokuluhlaza, unokukhetha umbala oluhlaza okwesibhakabhaka njengombala omele indalo. Umbala oluhlaza, o-grey-blowu, okanye ozuba luhlaza, uya kuthatha ngokungathi usekupheleni kolwandle. Umbono wendalo, ococekileyo, oqaqambileyo, kwaye opholileyo oqhutywa ngulo mbala uya kwenza ubuthongo bakho buhle.
Njengokuluhlaza, ukuphunyezwa kwemibala yepeyinti yodonga oluhlaza okwesibhakabhaka nako kunokunika imeko entle. Nangona ibandakanyiwe kwimibala enokuphakamisa, i-bluu izisa umbono obandayo ukuze ulale ngokulula.
Izikimu zombala wegumbi lokulala # 3: Beige
I-Beige, edibanisa umbala omdaka kunye nomhlophe, ifakwe kumbala ozolileyo kunye ozolileyo. Lo mbala unokwenza ukuba abantu abakhona baziva behlaziyekile kwaye bekhululekile ukuze baphumle kakuhle. Akumangalisi ukuba lo mbala usetyenziswa ngokubanzi kwiihotele zeenkwenkwezi ukwenza iindwendwe zabo zizive zisekhaya.
Izikimu zombala wegumbi lokulala # 4: Grey
Hlanganisa umbala ongwevu ezindongeni kunye nomgangatho wamaplanga, emva koko igumbi eliziva lifudumele kwaye likhululekile liya kwenza umgangatho wokuphumla kwakho uphucule. Nangona ibandakanyiwe kwimibala eguquguqukayo kunye nele mihla, ukukhetha lo mbala njengombala wepeyinti yakho yokulala kunokunika umbono wokuba ubanzi kwaye ucocekile. Ilungele amagumbi okulala amancinci.
Ngoku ucinga ukuba ngowuphi umbala wependi yodonga onokuyikhetha? Ewe ewe, gcina engqondweni ukuba ukufumana imeko entle kwigumbi lokulala, emva koko into yokuqala enokuyenza kukulungelelanisa umbala wodonga lwegumbi kunye nokukhethwa kombala ofanelekileyo. Gwema imibala ebabayo okanye imibala emnyama kakhulu kuba iya kudala ukungathandekiyo.
Iingcebiso ze-Smart zoKwenza iGumbi lokulala elinokuncomeka kunye neZikimu zemibala yokulala
Phambi kokuba wazi izikimu zombhede wegumbi lokulala elilungele impilo, okokuqala, yazi iingcebiso malunga nokwakha igumbi lokulala elinomgangatho ongezantsi. Igumbi elinethezekile ngokuqinisekileyo linendawo yangaphakathi eyilwe ngononophelo, kubandakanya nokukhethwa kwemibala yepeyinti kunye nefenitshala efanelekileyo. Nazi ezinye zeengcebiso ezinokusetyenziselwa ukwenza igumbi elifanelekileyo.
Khetha imibala enemibala ezolileyo ukuze ingakuhlali uphaphile kwaye unamava okulala.
Nika umbono obanzi, nangona igumbi linesayizi enkulu kakhulu.
Khetha umdlalo ofanelekileyo phakathi kombala wepende kunye nefenitshala egumbini. Imibala engathathi ntweni ehambelana nayo yonke imibala ingcono.
Sukuqokelela izinto ezininzi kwigumbi. Khetha izinto ezisebenzayo nezifuneka kwigumbi.
Xa uvuka kusasa, umbala ophuzi unokukunceda ukuba uqale usuku ngentshiseko engakumbi. Lo mbala uza kukugcina uxinzelelo. Khetha umbala othambileyo ophuzi ukuze ungakwenzi ukonwabele ebusuku.
Ngokusisiseko, akukho zifundo zongezelelweyo kwimibala yepeyinti yegumbi elilungele impilo. Ke isiphumo sombala kumntu ngamnye sinokuhluka. Nangona kunjalo, khetha umbala owenza ukuba uhlale uhlaziyekile kwaye ukhululekile ukuba ungabi nakho ukuphazamiseka kokulala kwaye impilo yakho ingaphazanyiswa.
Umbala unxulumene kakhulu nokunambitha ukuze wonke umntu ngokuqinisekileyo abe nokhetho olwahlukileyo. Ukuba umbala owuthandayo ungabandakanywa kumbala onokudala ukukhululeka, lungelelanisa ekukhetheni kwemihlobiso yegumbi. Imibala ecolekileyo inokulawula, kodwa oko akuthethi ukuba akufuneki kubekho eminye imibala enokuphakama egumbini. Ke, kukonwabele ukuphononongwa ngeyona ndlela intle yeziKimu zemibhede yakho yokulala!